I-Adobe Premiere kunye neziphumo ezichazwe kwangaphambili zevidiyo | Izidalwa ezikwi-Intanethi
I-Adobe Premiere kunye nevidiyo
Adobe Inkulumbuso kunye nevidiyo Bangumlingani omkhulu kuwo nawuphi na umsebenzi okanye umsebenzisi ofuna ukuhlela iividiyo. Yinkqubo esivumela hlela ividiyo ngendlela eyiyo Ndiyabulela kunxibelelwano lwayo olukhulu kunye neendlela ezahlukeneyo zokuhlelwa kwevidiyo. Unikeza a amathuba angenasiphelo xa usebenza nevidiyo, ubonelela umsebenzisi ngeendlela ezahlukeneyo ezihambelanayo.
Isixhobo esihle sokufaka zonke iintlobo ze ukulungiswa kwevidiyo ngendlela phantse zenzekelayo INkulumbuso ivumela ukuba songeze iividiyo zethu. Inkqubo ye- Iziphumo ezichazwe kwangaphambili ligalelo elikhulu xa kuziwa yenza izixhobo zokumamela kunye nobuhle obunomtsalane, un uluhlu olubanzi lweziphumo kwaye enkulu ukusebenziseka lula yenze ibe sisixhobo esisebenzayo kuye nawuphina umntu okhangela ukwenza umxholo weevidiyo ezahlukeneyo ngokukhawuleza.
En INkulumbuso masifumane enye ezahlukeneyo zokhetho ukuguqula iividiyo zethu, kusuka Iziphumo ezichazwe kwangaphambili kukhetho oluntsonkothileyo kodwa lwenziwe ngendlela yokuba kulula kakhulu ukuzisebenzisa. Ukuba uqhele ukusebenza ne Adobe Ayizukubanzima kuwe ukuhamba ujongano lwayo kuba zonke iinkqubo ze Adobe Banonxibelelwano olufanayo ukuze umsebenzisi akwazi ukusebenza ngendlela ebutofotofo.
Kule posi siza kugxila kuphela kuthotho lweziphumo ezibizwa "Iziphumo zeKinematic", ezi ziphumo zisetyenziswe kwiividiyo ezisinika zona ezahlukeneyo zobuhle, Ubulula bayo bokusetyenziswa ngamandla ayo aphambili.
Umzekelo wento enokwenziwa ngolu hlobo lwezixhobo zokunyanga imifanekiso ingabonwa kwiifilimu ze-cinema, kufuneka sazi ukuba nganye ibhayisikobho inombala wayo obalaseleyo ophawula oko.
Xa uhlela ividiyo, into yokuqala esiyifunayo kukuba nayo imathiriyeli emanyelwayo ukuqala ukusebenza kamva. Nje ukuba sibe nale nto siza kuya kuyo Inkulumbuso.
Ukuqala siya kukhetho Iziphumo zevidiyo ebekwe kwinxalenye esezantsi yenkqubo. Kweli candelo siza kujonga ifolda Lumitri ujongeka, Nje ukuba kuvulwe siza kubona iziphumo ezinokuthi sizisebenzise kwiividiyo zethu, kubandakanya Iziphumo zeemovie.
Kweli candelo siza kubona zonke iimpembelelo ezinokubakho esinokuzisebenzisa kwiividiyo zethu.
Inyathelo lokugqibela lokusebenzisa iziphumo kwiividiyo zethu zilula ngokwenyani. Sirhuqa isiphumo kwividiyo ifunyenwe kwi-timeline. Nje ukuba senze oku, isiphumo siya kusetyenziswa ngokuzenzekelayo kwividiyo yethu.
Njengoko sibona faka iziphumo kwi I-Adobe Premiere yinto kakhulu ngokukhawuleza kwaye kulula esivumela ukuba sisebenze ngendlela ezenzekelayo xa uhlela ividiyo. Kuyathakazelisa kakhulu ukufumana ezi ndlela zichazwe kwangaphambili njengenkxaso yeeprojekthi ezithile, kodwa kuyacetyiswa ukuba wenze oko kugqityiweyo kokuvela kweevidiyo zethu. I-Adobe Premiere, njenge Photoshop kunye nezinye iinkqubo Adobe ivumela ukubasebenzisa zonke iintlobo zeziphumo zonyango lomfanekisoNgesi sizathu sinokwenza ubuhle beevidiyo zethu ngendlela evulekileyo ngokupheleleyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Tutorials » I-Adobe Premiere kunye nevidiyo